घर र परिवार, वंशावली
परिवार मा एकदम अक्सर विभिन्न प्रश्नहरू आफ्नो नातेदार (टाढा र नजिक) र पुर्खाहरूको रूपमा खडा। हजुरबा हजुरआमाले आफ्नो परिवार के परिचित थिए, माथि वृद्धि कसरी र कहाँ बारेमा, आफ्नो बाल्यकाल बारेमा reminisce सुरु गर्दा यो सामान्यतया हुन्छ। यी कथाहरू अनुसार, तपाईं एकदम सम्भव यो कार्य धन्यवाद आफ्नो नातेदार बारेमा धेरै सिक्न किनभने, आफ्नो परिवारको वृक्ष बनाउन प्रयास गर्न सक्नुहुन्छ। आफ्नो पुर्खा कसरी पाउन? हामी सँगै बुझ्न प्रयास गर्नुहोस्।
किन खोज प्रयोग गर्ने?
हरेक वर्ष थप र थप मान्छे आफ्नो जरा रुचि राख्नुहुन्छ। आफ्नै पुर्खाहरूको विज्ञान आफ्नो वंश बारेमा भावुक भएका मानिसहरूको विशाल नम्बर आकर्षित गर्छ। तिनीहरूलाई केही सामान्य सामाग्री उद्देश्य आफ्नो पुर्खाहरूको फेला पार्न प्रयास - या त धनी बन्न वा आफ्नो हजुरआमा वा grandfathers एक पटक प्रसिद्ध थिए किनभने, वा एक उच्च जाति गर्न belonged नयाँ-फेला नातेदार, वा किनभने सामान्य प्रतिष्ठा को विदेश जाने। अरूलाई सरल मानव उद्देश्य खोजी गर्न थालेका छन् - तिनीहरू साँच्चै आफ्नो वंश जान्न चाहन्छु।
आफ्नो पुर्खाहरूको कसरी पाउन?
कुनै पनि मामला मा, यस खोज आदर योग्य हुनुहुन्छ। तर यहाँ, यो अभिलेख आफ्नो पुर्खाहरूको कसरी पाउन होईन यो काम सुरु गर्न निर्णय गरेको छ जसले सबैलाई थाह छ। कहाँ जाने? तपाईं के थाहा हुनुपर्छ? यो कति खर्च हुनेछ? र यो कि आफ्नो पुर्खाहरूको थाह गर्न चाहन्थे जो मान्छे को मन मा उत्पन्न समस्याहरू एक exhaustive सूची छैन।
आफ्नो पुर्खा कसरी पाउन? दुई सम्भव तरिकामा तपाईं प्रत्येक स्थिति को लागि सबै भन्दा उपयुक्त चयन गर्न सक्नुहुन्छ त्यहाँ। पहिलो विकल्प कम खर्चिलो छ - यो एउटा छुट्टै खोज छ। तपाईं दोश्रो विकल्प चयन भने - एक पेशेवर को संलग्नता संग, तपाईं यस भुक्तानी सेवा छ र धेरै सस्तो छैन भनेर अग्रिम विचार छ। तर काम को परिणाम पहिलो मामला मा भन्दा बढी सही र छिटो हुनेछ।
ओह, ती महिमित सैनिकहरु!
लगभग हरेक परिवार महान् विजय 45th को नाम मा आफ्नो हात दिए व्यक्तिले (र कहिलेकाहीं अधिक एक), छ। दुर्भाग्यवश, छैन महिमाको सैनिकहरु र अधिकारीहरू सबै सन्तानले आफ्नो हजुरबा हजुरआमाले जानकारी धेरै सजग हुन्छन्। लडेको गर्ने पुर्खा कसरी पाउन? र यहाँ तपाईं आफ्नो आत्मकथाहरू, आफ्नो जीवन, आफ्नो कमाल केही विवरण सिक्न मदत सेवाहरूको एक किसिम को सहायता गर्न आउनुहोस्। तिनीहरूलाई को एक प्रमाणहरू र जो द्वितीय विश्व युद्ध र पछि संघर्ष मृत्यु सिपाहीहरूले को कागजातहरू प्रस्तुत जो रक्षा मन्त्रालय, को परियोजना हो - obd-memorial.ru। त्यहाँ हराइरहेको सैनिकहरू लागि खोजी जो क्षेत्रीय युवा संगठन खोज संगति "कर्म भोज", हो। आफ्नो मद्दत आफ्नो पुर्खा कसरी पाउन को समस्या, यो त गाह्रो छ।
र यो धेरै राम्रो जस्तै सेवाहरू भनेर हो। यो बाल्यकाल देखि सबै ज्ञात छ, "कुनै एक भूल छ, केही भूल छ" वाक्यांश धेरै सही छ नयाँ सास पाए। कठिन वर्ष मा सोभियत संघ को छेउमा लडे प्रत्येक उहाँलाई लायकको छ मात्र होइन थाहा, तर याद गर्न पनि। सन्तानहरूलाई यो वर्ष आउन लागि हाम्रो हृदयमा एउटा राम्रो स्मृति राखिएको।
प्रयोगको लागि निर्देशन। सुरु बिन्दु
एक वंशावली रूख सुरु गर्न, तपाईं आफ्नो परिवार इतिहासबाट पनि सम्झन सक्नुहुन्छ कि आफ्नो पुरानो नातेदार सोध्न सक्नुहुन्छ। पारंपरिक जानकारी - र हामी नाम, मध्य नाम, थर र जन्म मिति मात्र होइन सिफारिस सिक्न। , नातेदार को जीवनी, निवास, अध्ययन, काम को आफ्नो ठाउँबाट रोचक प्रासंगिक क्षणमा मानार्थ संकेत, सजावट र पदक, शायद पनि केही सोख awarding - अप निर्दिष्ट गर्न सकिन्छ रूख र मात्र तपाईंलाई फेला पार्न सक्छन् अन्य जानकारी रेखाचित्र मा। यो थप जानकारी को लागि धन्यवाद सजिलै एक विशेष परिवारको इतिहास को एक सानो विश्वकोश परिणत रूख सामान्यतया छ।
आफ्नो नाम कहाँ गरे?
कुनै कम रोचक बारेमा जानकारी छ के मूल नाम को इतिहास। दुवै पुस्तकालयको लिइएका, र पुस्तक पसल मा प्राप्त - कम्तिमा न्यूनतम डाटा प्राप्त गर्न, तपाईं थर को शब्दकोश प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। नाम एकदम साझा पनि यस्तो सानो पुस्तिका छ भने मूल, समय र यसको घटना ठाउँमा एकदम छ संक्षिप्त। साथै, एक वर्ग सहायक नाम र साँच्चै पत्ता लगाउन।
त्यसै गरी, तपाईं मालिक परिवारको सामाजिक स्थितिको बारेमा जानकारी पाउन सक्नुहुन्छ। उदाहरणको रूपमा हामी "-ski" वा "-tsky" र मूलतः एक ग्रीक वा ल्याटिन शब्द भएको पनि theologian वा वैज्ञानिक नाम, अवकाश या नियमहरूले सीधा चर्च सम्बन्धित अन्त्य अन्तिम नाम लिन सक्छ। यस मामला मा वंशावली थर भन्दा संभावना छ, ब्याज को पुर्खाहरूले एक पर्खालहरु र नयाँ नाम पायो जो मा, Seminary मा एक विद्यार्थी थियो, त्यो देखाउँछ। यो, उदाहरणका लागि, लागू Transfiguration को भोज को नाम बाट देखा कि भिन्न - Transfiguration। अर्कोतर्फ, केही अक्षरहरू नाम छोटो छ भने, तर बाँकी भाग एक प्रसिद्ध महान परिवारको सामान्य नामको व्यञ्जनवर्ण छ, यसलाई आफ्नो समर्थन एक nobleman सन्तान हो भनेर सम्भव छ। को बिहे नभएको छोरी Grigoriya Potemkina थियो, र यो कि महारानी आफु rumored छ जो एलिजाबेथ Temkin, रूपमा। त्यसैले मान्छे को लागि खोज मात्र होइन उपयोगी तर पनि मनोरंजक जानकारी धेरै दिन सक्छन्।
pedigrees प्रकार निर्धारण
उकालो र तलतिर - त्यहाँ pedigrees दुई मुख्य प्रकार हो। पहिलो मा निर्माण, त्यसैले यसको व्युत्पत्ति बनाउन सुरु गर्ने एक देखि बोल्न, को आवेदक, सुरु हुन्छ। आमाबाबु, बाजेबज्यै, र यति मा - त्यसपछि सबै आफ्ना नातेदार बारेमा जानकारी जान्छ।
तयारी को दोस्रो embodiment को टाउको मा पुरानो वंश संस्थापक मात्र पत्ता सकिन्छ जो लायक छ। र पछि आवेदक सहित यसको सन्तानहरू सबै उल्लेख। यहाँ टाढा नातेदार गरिरहेको के, सारा दौड हेर्न गर्न सम्भव छ।
प्रकार pedigrees अलग एक सानो अवलोकन गर्न सकिन्छ:
1 पुरुष बढ्दो - मात्र पुरुषहरु यो समावेश। यो एक साधारण लाइन जस्तो देखिन्छ। यो व्युत्पत्ति संग, तपाईं पनि कुनै पनि ऐतिहासिक आंकडा, वा विगतमा पनि एक प्रसिद्ध व्यक्ति आफ्नो जडान परिभाषित गर्न सक्नुहुन्छ।
2. पुरुष तलतिर गरेको - दौड को टाउको चुन्नु र उहाँलाई यो दौड मा कान्छो मानिसलाई माला सुत्छन् गर्नुपर्छ।
3. मिश्रित बढ्दो - पुरुष र महिला दुवै संकेत गर्नुभयो। प्रगति ज्यामितीय मा संकेत नातेदार - पहिलो 2, त्यसपछि 4, 8, 16, 32 र यति मा।
4 तलतिर मिश्रित - पनि नातेदार द्वारा दुवै sexes संकेत गर्छ। यो व्युत्पत्ति धेरै नाम र जन्म accommodates।
यस वंशावली रूख यस संकलनको गर्न सजिलो छ। यो समय र धैर्य शेयर महत्त्वपूर्ण छ।
नाम लागि हामी देख रहे
यदि त्यहाँ तिनीहरूले विदेश बाँच्न सारियो भन्ने जानकारी छ मान्छे को लागि, नाम द्वारा खोज कसरी गर्ने?
सुरु गर्न, यो, यो आवेदक तिनीहरूले छोराछोरीलाई छ कि छैन भनेर तिनीहरूले विदेश आफ्नो नाम के भयो जब नातेदार, के आफ्नो वैवाहिक स्थिति, छ कि छैन भनेर वा विदेश स्पष्ट हुनुपर्छ र तिनीहरू सारियो। इजरायल, अमेरिका र क्यानाडा - निवास देश अज्ञात छ भने, तपाईं सबैभन्दा लोकप्रिय लागि देख सुरु गर्न सक्नुहुन्छ।
अभिलेख नाम सधैं यो पनि यसको लागि प्रतीक्षा, तपाईं उपयोगी जानकारी पाउन सक्नुहुन्छ, त्यहाँ थियो किनभने, सहयोगी हुनेछ। अन्यत्र खोजी गर्न, यो एक विदेशी भाषा थाहा राम्रो छ। पनि संसारको खोज इन्जिन वा सामाजिक सञ्जाल को मद्दतले नातेदार फेला पार्न प्रयास गर्नुहोस्।
अभिलेखहरु मार्फत खोज
कम्तिमा आफ्नो नातेदार संग्रह उल्लेख गर्नुपर्छ फेला पार्न प्रयास गर्न। जो प्रत्येक लागि नाम, मानिसहरूको जीवन हो, त्यहाँ ठूलो सेट, त्यसैले यो विधि प्रभावकारी हुनेछ भन्ने आशा छ।
पहिले तपाईं के खोज अवधि पत्ता लगाउन, र अभिलेख registrar जाने आवश्यक छ। र पहिले नै त्यहाँ - ग्राहक गर्न आवश्यक जानकारीको लागि अनुरोध पेश गर्न वा व्यक्तिगत आउन। संग्रह मात्र होइन registrar, तर पनि, उदाहरणका लागि, चिकित्सा र शैक्षिक संस्थाहरू छ कि भूल छैन।
घर क्रनिकल, जनसंख्या जनगणना, विभिन्न वर्ष मा आयोजित मा रहछन मापन, सूची - खोजे विशेष ध्यान संग स्रोतहरू जाँच्न गर्नुपर्छ जानकारी प्राप्त गर्न।
अर्को अनुसन्धान निर्देशन - कम्युनिस्ट पार्टी - स्मृति को सबै-रूस पुस्तक, संघ को सबै नागरिक को डाटा यसलाई भण्डारण विघटित किनभने। यो पुस्तक महान देशभक्तिपूर्ण युद्ध मा लड मा भाग गर्ने नागरिक को एक धेरै ठूलो आधार छ। सबै मान्छे को नाम भर्ती को ठाउँमा क्लस्टर्ड थिए। गाडे छ, तपाईं पनि जहाँ व्यक्ति चाहन्थे छ पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ, जीवन र लडाई - त्यहाँ एक को merits बारेमा जानकारी प्राप्त गर्न यहाँ पनि मौका छ। धेरै मानिसहरू महत्वपूर्ण र धेरै आवश्यक जानकारी रूपमा 750 मात्रा मा धेरै देखाउँछ।
हामी आफैलाई के
कसरी परिवार रूख पुन: सिर्जना गर्न रूपमा राम्ररी सकेसम्म आफ्नो पुर्खा खोज्न र बुझ्न, तपाईं धेरै चरणमा मार्फत जानु पर्छ। सबै जानकारी भेला, तपाईंको आमाबाबु, बाजेबज्यै, aunts, अंकल कुरा। स्क्यान फोटो संरक्षित गरिएको छ कि। यो प्रत्येक को विवरण तयार गर्न एक राम्रो विचार हुनेछ परिवारका सदस्यहरूले। यो धेरै वंशावली वेबसाइट मा हेर्न उपयोगी छ। वा तपाईं व्यवसायीक गर्न गर्न सक्नुहुन्छ।
यो सबै महत्त्वपूर्ण छ - नातेदार बीच आनुवंशिक रोग र विशेषताहरु, चासो, बानी, सम्बन्ध: हामी राम्ररी रूख तयार गर्न बुझ्न आवश्यक छ।
एक शीर्ष-तल वा तल-माथि - यो चुनिएको हुनेछ रूख कस्तो आदेश, निर्धारण गर्न आवश्यक छ। यो पनि परिवार रूख सङ्कलन गर्न एक कार्यक्रम चयन गर्न एक राम्रो विचार हुनेछ। तिनीहरूलाई को कारण धेरै, धेरै सजिलो छ। कार्यक्रम पछि चित्रहरु, परिवार सदस्य र आवश्यक संकेतन सम्बन्ध राख्न। क्वेस्ट नयाँ जानकारी थप्न।
अब तपाईं तयार रूख द्वारा एक ठूलो पानामा, उदाहरणका लागि, एक पुस्तक बनाउन छाप्न सक्नुहुन्छ वा। तपाईं पनि जानकारी सामाग्री पूरक गर्ने आफ्नो नातेदार, प्रतिलिपि ल्याउन सक्छ। यसरी परिवार रूख विस्तार।
कसरी परिवार रूख सिर्जना गर्न। यस वंशावली रूखको निर्माण कार्यक्रम
प्याक कसरी उपहार, मूल विनोदी वा आधिकारिक छ
एक वृक्ष कसरी बनाउने। चरण पुस्तिका द्वारा चरण
आफ्नो भाइ पत्नी कसरी बुझ्न - जो मलाई त्यो छ?
"Enterofuril" (निलम्बन) - प्रयोगको लागि सिफारिस
सोची, "Chistye Prudy": विवरण र ग्राहक समीक्षा
सिद्धताको अपेक्षा राख्ने झुकाव कस्तो छ, र तपाईं उसलाई लड्न गर्न चाहनुहुन्छ कि?
Gioachino Rossini गरेको "ओस्लो को नाई": सारांश
पन्नी मा पाकेका छम। नुस्खा, जो पहिले पनि Gourmets प्रतिरोध गर्न
चिकित्सा "Diara": प्रयोग, analogs, समीक्षा लागि निर्देशन
नागरिक कर्तव्य। आधारभूत अधिकार र रूस को एक नागरिक को कर्तव्य